अचम्म दुनिया Archives - Page3of 13 - Suchana Daily
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित नायिका हुन् आलिया भट्ट । बेलाबोमा चर्चामा आउने आलिया यतिबेला पनि पुन चर्चामा आएकी छिन् । कहिले उनले लगाएको ड्रेसका कारण चर्चामा हुन्छिन त कहिले प्रेमका कारण चर्चामा आउने गर्दछिन् ।बलिउडमा पछिल्लो समय आलिया भट्टले आफूलाई नम्बर वान नायिकाका रुपमा उभ्याएकी छिन् । केही समयअघि.....
तपाईलाई थाहा छ ? महिलाहरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ?
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी प’क्षपाती हुँ । मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका महिलाका.....
हिन्दु धार्मिक परम्पराअनुसार विवाहका बेला बर-बधुको चिना मिलाउँदा महिलामा हुने लक्षणलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । खासगरी ३२ गुण भएकी युवती सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन् । धर्मशास्त्रमा ‘३२ गुणले सम्पन्न’ नारीका बारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । महिलनामा हुनु पर्ने ३२ लक्षणहरु यी हुन् १) पद्मासनमा बस्दा वृत्ताकार (गोलो).....
प्रेम प्रस्ताव राखेपछि स्वीकार होला वा नहोला भन्ने पी’रले प्रत्येक प्रेमीलाई सताउँछ । जसले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गराउनकै लागि नयाँ नयाँ शैली अपनाइन्छ । यस्ता शैली रोचकमात्र हुँदैनन् कुनै कुनै बेला बहुत ख’तरनाक पनि हुन्छन् । यस्तै सबैलाई चकित बनाउने घ’टना छ बेलायतको । बेलायत निवासी रिकी एश नामक.....
पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कर्महरु भइरहेका हुन्छन् । जुन कुरा सुन्दा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्त तर ति वास्तवमैं सत्य हुन्छन् । यस्तैं एउटा घटना भारतको बिहार राज्यमा भएको छ । जुन नेपाली सीमा नजिक छ । यस्ता घटनाले नेपाललाईपनि प्रभाव पार्दछ । यहाँ आफ्नै भाउजु लिएर देवर फरार भएका छन्.....
१० वर्षीया सविता, नौ वर्षीया सुनिता र पाँच वर्षीया र मिला एकैपरि वार का टुहुरा दिदीबहिनी हुन् । फुसले छाएको घर भत्किने अवस्थामा पुगेको छ भने खाने अन्न छैन । भोकले छटपटाउँदा उनीहरू माटो खान्छन् । जिउमा फाटेको एकसरो लुगाबाहेक राति ओढ्ने–ओ छ्याउने थप कपडा छैन । दिउँसो घाम तापेर र राति आगो बालेर बस्ने गरेका.....
आफ्नै घरमा बुढोसंगै प्रेमीलाई पनि राख्नपाउँ भन्दै जब महिला, प्रहरी कार्यालय पुगेपछि…
संसारमा अनौठा घटना सुनिन्छ जसले मानिसलाई पत्यार लाग्दैन । श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा कोही तेस्रो ब्यक्तिको प्रवेश भयो भने त्यो सम्बन्ध विग्रन्छ । तर यहाँ त एक महिला श्रीमानको घरमा श्रीमानसंगै प्रेमीलाई पनि राख्नपाउँ भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेको घटनाले सबैलाई चकित बनाएको छ । यो घटना भारत इन्दोरको.....
एक महिलाको टिकटक भिडियो भाइरल भएको छ । उनले भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो गिफ्ट दिएपछि उनी चर्चामा छिन् । खासमा ती महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई ती सबै युवतीका फोटोहरु प्रिन्ट गरेर उपहारको रुपमा दिइन् जुन फोटोहरु उनका श्रीमानले इन्स्टाग्राममा लाइक गरेका थिए । महिलाले आफूले श्रीमानलाई.....
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान हरेकको दिलमा राज गर्ने व्यक्ति हुन् । उनको फ्यानको उनीप्रतिको क्रेज यस्तो छ कि सलमानको जुनसुकै फिल्म रिलिज भएपनि सुपरहिट भइहाल्छ। बलिउडमा उनको सफलताको आजपनि ग्यारेन्टी जस्तै नै छ । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ हो ।सलमानलाई वर्षौदेखि प्रशंसकहरुले एउटा प्रश्न पटक-पटक गर्ने.....
यी नेपाली सेलिब्रेटी, जसले बिहे पछि, ‘डि’भोर्स’ गरे
सेलिब्रेटीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको र छिट्टै नै उनीहरुको प्रेम टुङ्गिएको समाचारहरु त बारम्बार आउने गर्छन् । यतिबेला देवांश राणासँग प्रेममा रहेकी साम्राज्ञी कुनै समय मयंक खड्कासँगको प्रेमका कारण चर्चामा थिइन् । आँचल शर्मा र पल शाह पनि प्रेम सम्बन्धमा रहेको खबर आइरहेको थियो पहिले । तर, केही दिन यता यी.....